Powerbeats Pro waxaa hadda laga heli karaa Ivory, Moss iyo Navy | Wararka IPhone
Apple waxay ka bilowday suuqa Mareykanka Powerbeats Pro bishii May ee la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, lagama helin inta badan waddamada Yurub illaa dhammaadkii Juun, horraantii Julaay. Waqtiga la bilaabay, waxay ku heli jireen oo keliya madow, inkasta oo faahfaahinta alaabtu muujisay midabbo badan.
Gaar ahaan midabada Ivory, Moss iyo Navy Blue. Si kastaba ha noqotee, midabadan lama heli doono illaa xagaaga. Si dhakhso leh looma odhan. Markii aan dhammeynayno bisha Ogosto, Apple wuxuu hadda ku daray helitaanka inta ka hartay midabada aan markii hore ahayn. Waqtiga qorista maqaalkan, helitaanku waa Ogosto 30.
ka Powerbeats Pro Waxay leeyihiin culeyska H1, oo lamid ah midka aan hadda ka heli karno jiilka labaad ee AirPods, sidaa darteed waxay si ficil ah noogu bixiyaan isla faa'iidooyinka intaas ka badan, oo ka mid ah taas oo ay ka muuqato suurtagalnimada in lagu dhawaaqo Siri iyadoo la adeegsanayo amar "Hey Siri."
Moodelkani sidoo kale wuu ina siiyaa iska caabbinta biyaha iyo dhididka, sidaa darteed waxay ku habboon yihiin dhammaan dadka doonaya inay ku raaxaystaan ​​teknoolojiyada wireless-ka ee dhagaha dhagaha iyagoo leh tayada wax soo saarka Apple soo saaro. Intaas waxaa sii dheer, mahadnaqa clip-ka dhegta, macquul maahan inay dhacaan iyadoo aan loo eegin nooca jimicsiga aan sameyneyno.
Sida AirPods, Powerbeats Pro waxaa lagu kaydiyaa kiiska lacag bixinta taas oo iyaduna u adeegta inay iyaga rarto inta aynaan isticmaalin. Nasiib darro, kiiska keydinta ayaa ka weyn kan AirPods, qayb ahaan sababo la xiriira sii wadida iskudhafka. Intaa waxaa dheer, nama siiso nidaam lacag-bixin la'aan wireless ah sida jiilka labaad ee AirPods.
Qiimaha midabada cusub ee Powerbeats-ka laga heli karo Waxay la mid tahay tii aan horay u haystay: 249 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Powerbeats Pro waxaa hadda lagu heli karaa midabada Ivory, Moss iyo Navy
Saacadda ka muuqata sawirka, waa noockee? Waan jeclahay '
Ku jawaab Tanant
Waqtiga LaMetric, waxaad dib u eegis ku haysaa baloogyada iyo kanaalkayaga Youtube